Global Voices teny Malagasy » Nihitsoka tao Korea Nandritra ny Telo Taona Ity vehivavy ity Tamin’ny Fiezahana Hody Any An-Tanindrazany Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2016 8:07 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Korea Atsimo, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka
Nandany ny telo taona lasa tao Korea i Kim Craig, nanantena ny hiverina an-tanindrazany any Etazonia. Sary: Kaomi Goetz
Ity tantara nosoratan'i Kaomi Goetz  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 17 Novambra 2016. Naverina nozaraina eto tao anatina fifanarahana-fifampizarana votoaty.
Fianakaviana iray tao New Hope, Minnesota no nanangana an'i Kim Craig tamin'ny faha-5 taonany. Tamina andro fararano iray vao haingana tao amina fivarotana kafe tao Seoul, toy ny paozina vehivavy Amerikana mpizahatany manao vakansy izy — tsy nanao ankosotra, akanjo tsotra. Nafarany tamin'ny teny Anglisy ny kafe-ny. Fa ara-teknika, tsy Amerikana i Craig. Tsy nahazo ny zom-pirenena Amerikana mihitsy izy.
Nanomboka tamin'ny taona 1950, ankizy mihoatra ny 160.000 avy any Korea Atsimo no natsangana olona avy amin'ny firenena hafa. Ny ankamaroan'ireo firenena nandray dia nandeha ho azy ny fanomezana zom-pirenena, afa-tsy iray ihany: i Etazonia. Namorona lavaka be ho an'ny sasany izay tsy nahazo ny zo tokony ho azony izany dingana izany. Tamin'ny volana lasa teo, zaza Koreana iray natsangana, Adam Crapser , no very zo ahafahany mijanona ao Etazonia ka tokony nalefa nody tany Korea Atsimo — firenena iray izay nilaozany 40 taona lasa izay fony izy mbola 3 taona — satria koa izy dia tsy nahazo zom-pirenena mihitsy.
Nanomboka niaraka tamin'ny tsy filaminan'ny fiainam-pianakaviany tao Etazonia ny olan'i Kim Craig.
Mpanararaotra ary nanary azy taorian'ny herintaona nananganany azy ny reniny hoy izy. Noho izany dia nalefa tany amina fianakaviana mpanangana iray tao Minnesota indray i Craig, izay tsy nety ihany koa. Tsaroany ihany koa ny nieritreretany endrika tetikasa fianakaviana iray, fa lainga izany hoy izy.
”Tsy dia manana fitadidiana be loatra aho, angamba [ny ankamaroany dia taminà zava-nitranga] ivelan'ny trano,” hoy izy. ”Tao an-trano, tena vitsy afa-tsy ny nahazoana kapoka.”
Tamin'ny 13 taona, nanandrana ny hamono tena i Craig. Nandositra izy ary nanomboka nisotro toaka. Rehefa niezaka ny nampody azy tany an-trano ireo manampahefana, tsy nety nandeha i Craig. Ny valintenin'ny reniny nanangana azy dia —”eny ary.”
Kim Craig, talohan'ny fanangananjaza tanyEtazonia. Sary: natolotr'i Kim Craig
”Hoy izy, ‘eny ary, hahazo izay tadiavinao ianao. Hamela ny zonay izahay, ary , sao hadinoko, tsy olom-pirenena ianao.’ Ary tamin'izany fotoana izany mbola tsy fantatro ny dikan'izany,” hoy izy mahatsiahy.
Na dia notaizaina toy ny Amerikana azy izy — ary niditra tamin'ny miaramila mihitsy aza taty aoriana — tsy olom-pirenena Amerikana izy. Nitaky fiandrasana an-taona maro aorian'ny fananganana iraisam-pirenena mialohan'ny hahazoana ny zom-pirenena ny fahabangàna amin'ny lalàna Amerikàna momba ireo mpifindra-monina. Mandritra izany fotoana izany, manafoana toy ny mahazatra ny zom-pirenen'ny ankizy any ny fanjakana Koreana. Fa ny ray aman-dreny sasany, toy ny an'i Craig, dia tsy mba nahafeno ny antontan-taratasy. Tsy fantatra na firy amin'ireo olona natsangana ao Etazonia no tsy manana ny zom-pireneny; mpisolovava maro no manombana fa an'aliny maro izany. Miteny ny governemanta Koreana fa tsy fantatra ny vokatry ny zom-pirenena ho an'ireo oona 18.000 natsangana ao Etazonia, na dia ekeny aza ny tsy nitahirizany angon-drakitra tsara ara-tantara.
Milaza i Craig fa nisy fotoana efa akaiky ny fahazoany ny zom-pirenena amin'ny tenany amin'ny maha-olon-dehibe azy. Taorian'ny nirotsahany tao amin'ny tafika, nanampy azy hameno ny antontan-taratasy ny tafika. Fa tsy nanatrika ny lanonana fanomezana ny fianianana izy satria nalefa tany Alemana talohan'ny nivoahan'ny fampiantsoana. Ary avy eo dia nisy fahavoazana iray indray: miteny i Craig fa nanao hadisoana ary noroahana tamim-pahafaham-baràka.
”Manana fahazarana miskotsiko-javatra aho,” hoy izy.
Niverina tany Amerika izy, nahazo asa, ary niteraka dimy. Nanambady indray izy ary nisaraka taty aoriana. Amin'ny maha-reny tokantena azy, be atao loatra izy tsy nisy niheverana ny hiverina any Korea mba hitsidika.
Fa taona vitsy lasa izay, vitan'ny iray tamin'ireo zanany vavy, mpankafy fatratra ny K-pop, ny nandresy azy nony farany.
“Nandefa mozika foana izy, ary hoy aho, ‘Inona izany henoinao izany?!’ Raha ny marina, tiako [ny tarika K-pop SHINee] ankehitriny, izy ireo no tena tiako,” hoy izy, mihomehy kely amin'ny fahatsiarovana. Hira iray manokana no tian'i Craig, ”Miangavy Aza Mandeha,” satria miresaka tantara momba fitiavana very na fisarahana ilay izy. Nampatsiahy azy an'i Korea Atsimo.
Naniry ny hahafantatra kokoa ny mikasika ny razambeny Koreana ireo zanany vavy noho izany nandresy lahatra an'i Craig mba hitondra azy ireo tany Korea Atsimo. Tsy afaka nahazo pasipaoro Amerikana izy, saingy hitany fa $35 dia afaka mahazo pasipaoro koreana iray izy. Noho izany nakany Korea hanao fitsidihana mandritra ny telo volana ry zareo.
Hoy i Craig hatrany am-boalohany, nahatsiaro hovitrovttra fankasitrahana izy — fofona mahazatra, sary mahazatra. Nahita ny tandavan-tendrombohitra tao amin'ny manodidina an'i Seoul ary nahatsapa fa ireo tendrombohitra mety nataony sary tamin'ny mbola kely tany Etazonia dia ankehitriny fahatsiarovana avy any Korea Atsimo.
Ary nisy izao: ”Fotoana voalohany teo amin'ny fiainako ahafahako mahatsiaro nandehandeha [manodidina] ary nitovy tamin'ny olon-drehetra aho,” hoy izy.
Indrindra tamin-dry zareo niomana ny hiverina hody anefa, very ny kitapom-batsin'i Craig. Nisy ny karatra maha-mponina mandrakizay ao Etazonia azy izany, izay efa nitenenana azy fa ilainy amin'ny fiverenana. Nankany amin'ny Masoivohon'i Etazonia tany Seoul mba hanampy azy izy hoy izy, fa naveriny nody fotsiny izy satria tsy olom-pirenena hono izy. Herinandro taty aoriana, niverina izy.
”Mbola zavatra nitovy ihany no nezahan-dry zareo nlazaina ahy. Hoy aho ‘tsia, miala tsiny aho, fa tsy fahadisoako izany. Tsy nangataka izany aho, mponina raikitra ao Etazonia aho, ianareo ry zalahy no naka ahy hivoaka [taty Korea Atsimo], nametraka ahy tany amin'iny firenena iny [Etazonia]. Teny Anglisy ihany no hany teneniko, tsy afaka miteny Koreana aho; mila manampy ahy ianareo.'”
Ny farany dia nisy olona nihaino ary nanaiky ny hanampy, izay rehefa nanomboka nahatsapa ny mety fahasarotan'ny toejavatra misy azy i Craig. Tsy afaka hosoloina ny karatra maha-mponina azy raha toa ka ivelan'i Etazonia izy. Ary raha tsy misy ilay karatra, notenenina izy fa tsy azo antoka ny famelana azy hiverina.
Niitatra ho telo taona ny fitsidihana mandritra ny telo volana nataon'i Craig. Miteny izy fa sarotra taminy ny nitady asa. Roa amin'ireo zanany no mbola eto ary mitoby ao, fa bokan-trosa i Craig. Ary satruai efa manakaiky ny 50 taona ary tsy manambady, sarotra aminy ny fidirana amin'ny fiarahamonina Koreana.
”Miezaka ny tsy mieritreritra mikasika izany isanandro aho fa te-hody any an-trano fotsiny. Fa tsy afaka aho,” hoy izy, mitàna ny ranomasony. ”Noho izany tsy mieritreritra momba izany aho.”
Karen Christensen, izay miandraikitra ny asa ho an'ny olom-pirenena ho an'ny Departementam-panjakana Amerikana any amin'ireo biraon'ny kaonsioly erantany, dia miteny fa tsy afaka niresaka ny toe-javatra niainan'i Craig izy, saingy nanamarina kosa fa tompon'ny teny farany amin'ny fidirana ny sisintany ny manampahefana amin'ny fifindramonina. ”Marina ara-teknika izany raha ny tena izy [kanefa] tsy fantatro hoe im-piry izany no mitranga,” hoy izy. Na niditra toy ny mpitsidika aza i Craig, mety hanimba ny endriny izy. Mety raisina ho toy ny hosoka ny fangatahana hanoloana karatra maha-mponina very raha niditra toy ny mpitsidika tao Etazonia ianao.
Miteny i Christensen fa mangoraka amin'ny toe-javatra hatrehin'ireo olona natsangana sasany izy.
”Ankizy izy ireo no nentona [tany Etazonia]. Takatro fa toejavatra sarotra izany,” hoy izy tamin'ny fitsidihana nataony vao haingana tany Seoul. ”Ireo olona ireo… tsy hoe tsy fahadisoana avy amin'izy ireo ny fanaovana hetsika. Hanome sosokevitra aho hoe efa olon-dehibe izy ireo amin'izao ka tokony hanatona ny Ministeran'ny Filaminana Anatiny, Sampandraharaha misahana maha-Olompirenena sy ny Fifindramonina ao Etazonia ka hijery mikasika ny fandraisana azy ireo ho Amerikàna.
Kanefa tsy mora izany. Miteny ireo mpisolovava fa tsy manana hitsin-dalana ireo olon-dehibe natsangana. Mila tsy maintsy mameno fangatahana toy ny an'ireo hafa mpifindra-monina rehetra mitady zom-pirenena izy ireo, ary mety ho dlara aman'aliny no karaman'ny mpisolovava sy ny taratasy — tsy lazaina intsony ny fiantraikany ratsy ara-tsaina sy ny ratram-panahy lehibe amin'ny fiaretana izany dingana tokony efa nokarakarain'ny ray aman-dreniny izany.
Tamin'ny 2001, niova ilay lalàna noho izany tokony ho lasa olom-pirenena ho azy ireo zaza natsangana. Fa tsy nihatra izany ho an'ireo mihoatra ny 18 taona tamin'izany fotoana izany, toa an'i Kim Craig, Adam Crapser, ary ireo maro hafa. Misy soso-kevitra  hanamboarana izany fahabangàna izany.
Ankehitriny dia mitohy manantena foana i Craig fa hiverina any an-tranony izany indray andro any, ary mbola ho tafaraka indray amin'ireo zanany telo hafa, izay tsy hitany nandritra izany fotoana rehetra izany. Fa mbola hila vola sy mety ho fanampiana avy amin'ireo manampahefana any Etazonia izany.
Miteny izy fa mbola manosika azy hizotra hatrany ireo zanany sy ny hatezerany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/01/92285/
 nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org : http://www.pri.org/stories/2016-11-17/woman-has-been-stuck-korea-three-years-trying-get-home-us